Sawirro: Sidee ayuu u dhacay aaskii Jeneral Cadde Muuse + Taariikh nololeedkiisa - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Sidee ayuu u dhacay aaskii Jeneral Cadde Muuse + Taariikh nololeedkiisa
Sawirro: Sidee ayuu u dhacay aaskii Jeneral Cadde Muuse + Taariikh nololeedkiisa
Boosaaso (Caasimada Online) – Meydka madaxweynihii hore ee Maamulka Puntland Maxamuud Muuse Xirisi (Cadde Muuse) ayaa ugu dambeyntii lagu aasay Boosaaso xilli amaanka garoonka diyaaradaha aad loogan taxadaray intii la sugayey diyaaradda waday Meydka.
Aaskaan qaran ayaa waxaa kasoo qeybgalay madaxweyne C/wali Maxamed Cali Gaas, wasiir ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidamada maamul Goboleedka Puntland.
Ciidamado ka tirsan maamulka Puntland ayaa diyaarada kasoo dajiyey meydka waxayna markii hore kasoo qaaday magaalada Dubai oo ah meeshii uu ku geeriyooday General Cadde Muuse oo maamulayey Puntland afar sano.
Madaxweynaha Puntland oo halkaas ka hadlay ayaa yiri: ” Waxaan meeshaan isug imaanay inaan ka qeyb qaadano aaska walaalkeen oo ahaa dhab ahaantii nin umadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhintay”.
Cabdiweli oo hadalkas sii wato ayaa yiri: ” Waxaan dhammanteen isku waafaqsanahay in uu ahaa Cadde Muuse Halyeey wax badan usoo taray Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana alle uga rajeeneynaa inuu siiyo naxariista”.
Cumar C/rashiid oo ahaa ra’isulwasaarihii waqtigiisa dhamaaday ayaa kamid ahaa xubnihii dowladda ka socday ee ka qeyb qaatay aaskaan, sidoo kalana waxaa goobta imaaday Ra’isulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi kaasoo dalka xukumayey Xilligii uu madaxweyne ahaa Allaha u naxariiste Cabdullaahi Yuusuf Axmed, si lamid ahna waxaa kasoo qeybgalay wasiiro ka socday dowladda dhexe.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa farrin tacsi ah u dhiibay Guddoomiye kuxigeenka koowaad aqalka sare ee Somaliya oo isna halkaas ku sugnaa.